एमाले अधिवेशनमा दलित मुसहरको शंकास्पद मृत्यु
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार २३:२७
सप्तरी १४ मंसिर । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको चितवन अधिवेशनमा सप्तरी सुरुंगा नपा ३ का ३२ वर्षीय भगलु सदाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ ।
सदा पार्टीको कार्यक्रममा मंसिर १० गते विहानै घरबाट हिंडेका थिए । उनीसँग ७ जना गाउँका अरु पनि थिए । तर उनीहरू कार्यक्रम सकाएर घर फर्केका थिए भने भगलु सदा फर्केका थिएनन् । घरमा सबैजना चिन्तित थियो । पार्टीको पुरै कार्यक्रम सकाएर घर फर्किनु हुन्छ भने आशामा थियो । तर, मंगलवार बेलुका भगलुको लास उसको घरमा आइपुग्यो । पलास्टिकमा बेरेर आइपुगेको उसको लाश देखेर पुरै वस्ती शोकमा छन् भने उसको पुरै परिवार मुर्छित अवस्था छन् । दुर्घटनामा परि उपचारको क्रममा उसको मृत्यु भएको खबर प्रहरीले दिएको स्थानीय एकजनाले बताए । उनले भने, खुट्टा भाँचिएको अवस्थामा छ । घटनाको बारेमा थाहै नभई कसरी लास जलाउनु भनेर जलाउन रोकेको उनले थपे ।
मृतकको बुबा प्रसुराम सदाले भने, घटनाको विवरण पुरै थाहा छैन् । कसरी मेरो छोराको मृत्युु भयो ? थाहै नपाई लास कसरी जलाउनु ? यदि मेरो छोरा पार्टीको कार्यक्रममा गएकोबेला मृत्यु भएको हो भने पार्टीले मंचबाटै सहिद घोषणा किन गरेन ? यो कस्तो विभेद हो ? घटनाको सत्यतथ्य छानवीन हुनुपर्छ । दुर्घटनामा परेको हो वा के भएको हो सहि सत्य छानबिन गरी दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भगलु सदा पाँच वर्पदेखि वैदेशिक रोजगारमा थियो । उनी भर्खर विदेशबाट आएर फेरि विदेश जान उसको कतारबाट भिसा समेत आइसकेको थियोे । उनी केही दिनमा फलाइट हुने तरखरमा थियो । यसै बिचमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय अधिवेशनमा साथीहरूको लहैलहैमा चितवनको सौरहा पुगेका थिए । सदाको केही वर्षको फरकमा ससाना १ छोरा २ छोरी छन् । एमालेले अधिवेशनमा दलित मुसहर वस्तीहरुबाट विभिन्न प्रलोभनमा पारेर थुप्रै मानिसहरुलाई कार्यक्रममा लगेको थियो । यो कार्यक्रममा भगलु सदा उनीहरुको लागि पहिलो सहिद भएको छ । हेरौं, उसको पार्टीले के गर्छ ।